Guurtida iyo Wakiilada oo wakhtigoodu dhammaanayo - BBC News Somali
Guurtida iyo Wakiilada oo wakhtigoodu dhammaanayo
6 Sebtembar 2010
Image caption Fadhiga Guurtida Somaliland
Golaha Guurtida ee Somaliland ayaa maanta waxa magaalada Haregysa uga bilowday fadhi aan caadi ahayn oo ay kaga doodayaan muddo kordhinta golayaasha Wakiilada iyo Guurtida oo wakhtigoodu dhawaan dhammaanayo.
Fadhiga oo uu guddoominayay ku simaha guddoomiyaha Golaha Guurtida, Shiikh Axmed Shiikh Nuux, ayaa waxa laga hor akhriyay qoraal soo jeedin ah oo golaha uu u soo qoray Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Siilaanyo.
Qoraalka ayaa Madaxweynuhu waxa uu ku soo jeediyay, maadaama wakhtigii golayaasha Guurtida iyo Wakiilada uu dhammaanayo bishan September dabayaaqadeeda iyo bisha October dhammaadkeeda, in muddo kordhin ay lagama maarmaan tahay.
Madaxweynaha ayaa muddo kordhinta ku sababeeyay dalka oo hadda uun ka soo baxay doorashadii Madaxtooyada, dhaqaale la'aan iyo wakhtiga oo ciriiri ah.
Golaha guurtida oo leh go'aanka wakhtiga ayaa waxa uu Madaxweynuhu usoo jeediyay inay la tashadaan dhinacyada daneynaya doorashooyinka.